Malunga nathi-Hebei Jiuhe Hengye Fastener Production Co, Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Ukwenziwa kwemveliso Co, Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Ukwenziwa kweMveliso Co, Ltd., ekwiYongnian, Handan, kwiPhondo laseHebei. Iimveliso eziphambili: Amandongomane aphezulu, amandongomane amade, amandla amancinanana esakhiwo sentsimbi, amandongomane ekwenziweni kwentsimbi, njl. Nkampani ibisenza uphuhliso, ukongeza, iba ngcono, kwaye ngoku umzi-mveliso wethu unezixhobo eziphambili, ezizinto isetyenziselwa ukwenza zonke iintlobo zezihloko ezibandayo ezinamacandelo akhethekileyo abunjiweyo, njengamantongomane, isikroba, iishetshi, i-hex bolte, i-flange Bolt, u Bolt, izixhobo zombane zombane, njl. njl.
U-Hebei Jiuhe Hengye Fastener Production Co, Ltd useto lophando lwezesayensi, ukuvelisa, ukuphatha njengenye yamashishini asemgangathweni asisiseko. U-Jiuhe Hengye uhlala ebambelela kwifilosofi yeshishini "lenkonzo liphucula ixabiso kunye nomgangatho uwinwe lihlabathi", basebenze ngokungqongqo inkcubeko yobunyani "ukuthembeka, uxanduva, intsebenziswano kunye nokwabelana", kunye nokuzabalazela ukudala umgangatho okhethekileyo we "Jiuhe Hengye". Ukubambelela kuko konke ukusuka kwindawo abajonga kuyo umthengi, iimfuno ezingxamisekileyo zabathengi, cinga malunga noko abathengi bacinga, banamathele kwipatheni yokuwina-kumacala omabini, kunye nokwenza ixabiso kubathengi.
Ixesha elide, abavelisi beJiuhe Hengye banedumela eliphezulu kwimizi mveliso ekhawulezayo ngenxa yenkqubo eqinisekisiweyo yomgangatho, inkqubo yolawulo engqongqo, ukuvelisa okunamandla kunye nokufumana okungaphaya kunye neendlela zokuqinisekisa. Ezi mveliso zithengiswa kakuhle kumaphondo angaphezu kwama-20 kunye nakwimimandla ezimeleyo e-China, kwaye zithembeke kakhulu kwaye ziyaxhaswa ngabathengi, kwaye zifumene umgangatho olungileyo.
Ngeenkampani ezininzi ezidumileyo zamazwe onke ziyila kwaye zisenzela izinto, iimveliso zethu zithunyelwe kwamanye amazwe kwiHong Kong, South Korea, Japan, Australia, Britain, Europe nase Middle East.
Yonke into oyifunayo ukwenza iwebhusayithi enhle